Uchwepheshe we-Semalt On How To Overcome Dridex Trojan Virus
Ukusebenzisa ikhompyutha ngobuqili Dridex iThrojani ingabacasula kakhulu. ITrojan yizo zombilii-virus enobuqili nebulalayo engena kukhompyutha yakho ngaphandle kwemvume yakho. Ngemva kokufakwa kwikhompyutha yakho, i-DridexI-Trojan ithatha inzuzo futhi iqala ukulawula uhlelo lwakho ngendlela embi.
Ngokusho kukaJulia Vashneva, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDivaysi, igciwane lesandulela ngculaza lingathola noma yiliphi uhlobo lwesistimu yamafasitela. Igciwane le-Trojan elibulalayo lingena kukhompyutha yakhoukuguqula izicelo zokuphepha ezifakiwe ezifana ne-window firewall ne-anti-virus.
Igciwane lithola ukufinyelela kwikhompyutha yakho ngaphandle kolwazi lomsebenzisi wokuphela.Ngemva kokufakwa kwikhompyutha yakho, leli gciwane lingakwazi ukuqoqa ulwazi olubucayi njengamaphasiwedi, amagama abasebenzisi be-akhawunti, kanye nemininingwane yasebhange.
Indlela iThrojani engena ngayo kukhompyutha yakho
I-Dridex Trojan ingafinyelela ohlelweni lwakho lokusebenza ngokusebenzisa ama-imeyili, lapho ligcinwa kuma-imeyili ogaxekile.
Igciwane leThrojani lingangena kukhompyutha yakho ngokusebenzisa ama-disks e-USB futhi iqhutshwa igciwane elifanayo.
Le gciwane lisakazeka kabanzi ngokusebenzisa amasayithi amabi.
iThrojani computer virus ingasakazekela kukhompyutha yakho ngokusebenzisa ukwabelana ngefayela.
Ingabe i-Dridex Trojan igciwane eliyingozi?
I-Dridex iTrojan iyigciwane elibulalayo elilawula ikhompyutha yakho ngaphandle kwakho konkeulwazi. Uma usakazwa kwikhompyutha yakho, igciwane lingalimaza i-PC yakho nge:
Ukweba imininingwane yakho ebucayi njengemininingwane yasebhange namaphasiwedi e-akhawunti.
engozini ubumfihlo bakho ngokwabelana ngolwazi lwakho olubucayi kubaduni.
Ukukhubaza amafasitela e-firewall yakho futhi ufake ama-anti-virus.
Ukunciphisa ukusebenza komshini wakho kanye nesivinini.
Abasebenzisi bekhompyutha kufanele babe nesibindi uma usebenzisa amakhompyutha ngenkathi bexhunyiwe kwi-intanethi.Nansi umhlahlandlela wenqubo ongasetshenziselwa ukususa igciwane leThrojani kusukela kumadivayisi we-PC ne-Mac.
Dridex Trojan ukususwa Windows Operating System
Amaklayenti asebenzisa ama-Windows OS angasusa igciwane le-Trojan elibulalayo ngokusebenzisa okuthuthukisiweAnti-Malware noma nge-prospect prospect. Kubasebenzisi be-Mac OS, bheka isofthiwe yokuphepha etholakalayo kwi-intanethi bese ususa le gciwane elibulalayo.
Igciwane leTrojan elibi lingasuswa kukhompyutha yakho kokubili futhingokuzenzakalelayo. Ukuze ususe leli gciwane kusuka ku-PC yakho, yenza ukucinga okuphelele futhi ubuke amafayela afihliwe. Susa wonke amafayela wokubhalisa ahlobene nawoIThrojani igciwane. Yiya kuphaneli yokulawula bese ukhipha Dridex Trojan kusuka iphaneli ngokuchofoza Imenyu yezilungiselelo.
Ungakwazi futhi ukuvula isiphequluli sakho, iya ezandisweni, chofoza ukukhangisa futhi ususeigciwane unomphela. Ukuze ususe i-Dridex Trojan virus kusuka kuziphequluli, usethe kabusha izilungiselelo, futhi igciwane lizophathwa.
Dridex Trojan ukususwa for Mac amadivaysi
I-Dridex Trojan iyinhlelo enonya eyenza ukunciphisa umshini wakho.Ukususa igciwane elibulalayo kusuka kumshini wakho we-Mac, landa uhlelo lwe-MacBooster oluhambisana nedivayisi yakho. Yenza uhlelo lugcweleukuskena ukuthola ukuthi kukhona noma iyiphi ifayela elingadingeki ku-Mac yakho. Chofoza inkinobho ngokukhetha 'izinkinga zokulungisa' ukususa zonke izinsongo ezinonya ukuthiingatholakala kumshini wakho. Ukuze ube nesibindi, ngaso sonke isikhathi ucabangele ukukhetha inketho yokungena ngokwezifiso ukugwema ukufaka izinsongo ezinonya kuPC yakho.